310+ Wolf အမည်များ: ယောက်ျား, မိန်းမ, နာမည်ကြီး & Alpha အမည်များကိုအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူ - ခွေးအမည်များ
310+ Wolf အမည်များ: ယောက်ျား, မိန်းမ, နာမည်ကြီး & Alpha အမည်များကိုအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူ
သင်၏ခြေလေးချောင်းနှင့်အမွေးထူသောအဖော်များသည်ဘုံအသိပညာဖြစ်သည် မီးခိုးရောင်ဝံပုလွေဘိုးဘေးရှိသည် ။ ၄ င်းတို့သည်သင်၌အရွယ်ရောက်ပြီးသောဝံပုလွေခွေးရှိလား၊ ထိုနည်းတူဝံပုလွေ hybrids လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ဒီမှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးဝံပုလွေအမည်များကိုစုစည်းထားတယ်၊ သင်ပိုမိုငိုကြွေးမြည်တမ်း ။
ကောင်းသော Wolf အမည်များ
Cool Wolf အမည်များ
အမျိုးသမီး Wolf ကအမည်များ
နာမည်ကြီး Wolf အမည်များ
အာလဖ Wolf ကအမည်များ
White က Wolf ကအမည်များ
Wolf ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောအမည်များ (ဘာသာစကားတစ်ခုစီ၌ Wolf)
သင်နှင့်အတူခွေးရှိပါသလား ခိုင်မာတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝံပုလွေကဲ့သို့အင်္ဂါရပ်များ ? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မီးခိုးရောင်ဝံပုလွေလေးကိုရိုးရှင်းစွာရိုသေလေးစားပါသလား။ သင်သည် Wolf အမည်များကိုသာကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤစာရင်းတွင်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
Achak - Native American မှစိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုသည်
Bardalph - ပုဆိန်ဝံပုလွေ၊
Beowulf - အင်္ဂလိပ်ဝံပုလွေဟောင်းတစ် ဦး အကြောင်း
Borris - ဝံပုလွေတိုတို (သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနာမည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ) သေးသေးလေးဂျာမန်သိုးထိန်း )
Dash - သင်၏ furry နည်းနည်းမြန်သောနတ်ဆိုးများအတွက်သင့်လျော်ခြင်း
Duke - မင်းသားတစ်ပါးဆိုတာမင်းရဲ့မင်းသားဖြစ်တယ်။ သင်၏နှလုံးကိုအုပ်ချုပ်သောသင်၏ခွေးတစ်ကောင်အတွက်နာမည်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Harou - စစ်တပ်၏ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်
Louve - ဝံပုလွေတစ်ကောင်
Nomad - ခွေးတစ်ကောင်ကသူလုပ်ချင်တာကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးရှိသူ
အိုကေမီ - ဝံပုလွေများအတွက်ဂျပန်စကားလုံး
Radolf - ဝံပုလွေနီ
စစ်ကိုင်း - ဆည်းဆာပရိသတ်များအတွက်တစ်ခု ...
Sky - အပြာရောင်မျက်လုံးများတပ်ထားသော Husky အတွက်အကောင်းဆုံးနာမည်
Ulva - သူမသည်ဝံပုလွေ
ကဗျာ - Blackfoot ရှိဝံပုလှေကိုဆိုလိုခြင်း
Ares - စစ်ပွဲ၏ဂရိဘုရားသခငျ
Arrax - နဂါးမင်းသည်သင်၏နူးညံ့။ ခွန်အားကြီးသော pooch အတွက်နာမည်ပေးသည်
Basil - သတ္တိဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောအကြိုက်ဆုံးရာသီသို့မဟုတ်အာရဗီအမည်တစ်ခု
Cronus - Hera ရဲ့အဖေ
Elda - အီတလီဘာသာစကားတွင်စစ်သည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်
Essos - Game of Thrones မှပထဝီဝင်အမည်
ဖျက်ဆီးခြင်း - မည်သည့် pup ကိုမဆိုအမှန်တကယ်ကိုက်ညီမည့်အမည်
Hera - အမျိုးသမီးဂရိနတ်ဘုရားမ
Hunter - သိသာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိပေမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွေးစရာတစ်ခု
Juno - Hera ရဲ့ရောမနဲ့ညီမျှတယ်
Khal - Thrones ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး
Rhea - Hera ရဲ့မိခင်
Rollo - ကိုးရာစုနှင့်ဒသမရာစုအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောဗိုက်ကင်းလူမျိုး
Stark - ရာဇပလ္လင်ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်
Tiva - အမေရိကန်ဇာတိမှာအကကိုဆိုလိုတာ
Tyr - စစ်ပွဲ၏ Norse ဘုရားသခငျ
Ubba - ၁၈၆၀ ပြည့်နှစ်များကအင်္ဂလန် -Saxon အင်္ဂလန်ကိုကျူးကျော်ခဲ့သည့်မဟာစစ်တပ်မှခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောဗိုက်ကင်းဖြစ်သည်။ အိုကေဒါသင့်ရဲ့ကလေးကအင်္ဂလန်ကိုမကျူးကျော်နိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စားစရာခန်းလုံလောက်စွာနီးကပ်ဖြစ်နိုင်သည်?
Wolf - တစ် ဦး ကဂန္နှင့်အချက်
Yara - နောက်ထပ် Thrones ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်
ဇု - ဂရိဘုရားတို့၏ဘုရင်
သူတို့၏လှပမှုနှင့်ခမ်းနားလှပမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဤ ၀ ံပုလွေအမျိုးသမီးများသည်နတ်ဘုရားမကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်ခိုင်ခံ့မှုရှိရန်သေချာသည်။
Ama - ခြာရိုကီရေ
အသီနာ - ဉာဏ်ပညာနှင့်စစ်၏ဂရိနတ်ဘုရားမ
Luna - အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလ
Nala - ဟုတ်တယ်၊ ဒီနာမည်က Lion King မှဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မျှမျှတတဖြစ်စေရန်, Nala သတ္တိဇာတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခြင်္သေ့သည်သူတို့၏အထုပ်ကဲ့သို့သောဗီဇအတိုင်းကြောင့်ဝံပုလွေများနှင့်လည်းဆင်တူသည်။
Nashoba ဝံပုလွေ - ဇာတိအမေရိကန်
စိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ Wolf- ဘဝ။ အောက်ပါအထီးအမည်များကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့၏စွမ်းအားကောင်းသည့်သဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအမည်များအားလုံးသည်အစွမ်းထက်သောမီးခိုးရောင်ဝံပုလွေသားစဉ်မြေးဆက်ဘုရင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်
Rafe - ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ဝံပုလွေကောင်စီ၏အဓိပ္ပါယ်
အမာရွတ် - ဒစ္စနေး၏ခြင်္သေ့ဘုရင်ထံမှအဓိကရန်သူဖြစ်သည်။ လူကြမ်းအဖြစ် (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်ချစ်စရာကောင်းသောလူကြမ်း) ကိုခိုင်မာပြီးဂုဏ်ယူသည့်အမည်ဖြစ်သည်။
အသက်ရှင်ခဲ့သမျှတွင်အကျော်ကြားဆုံးဝံပုလွေသည် Yellowstone မှ '06 ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရုပ်ရှင် (ဥပမာ The Jungle Book) ဇာတ်ကောင်များ (ဥပမာ Balto) နှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများ (ဥပမာ Game of Thrones) မှလာသည့်နာမည်ကြီးနာမည်များစွာရှိသည်။
Akela - တောတွင်းစာအုပ်
အဖြူရောင် - ကျော်ကြားသော Universal စတူဒီယိုဇာတ်ကောင်များ
Ghost - ရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်း
Larka - The Sight ဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်
Sansa - Thrones ဂိမ်း
Stark - ရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်း
ဝံပုလွေများသည်အစွမ်းထက်။ ပြင်းထန်သောတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်သဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါသည်ခိုင်မာသောခွေးနှင့်ကိုက်ညီသောအားကောင်းသော alpha wolf အမည်များစာရင်းဖြစ်သည်။
အာလဖ - အဆိုပါ pack ကို၏ခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်သင့်သားမွေးမိသားစုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနာမကိုအမှီ
Gengy - Genghis Khan ပြီးနောက်
Lycidas - ဝံပုလွေသားကိုဆိုလိုသည်
Spike - ဒီဟာကခက်ခဲတယ်
Theo - Theodore Roosevelt ရုစဗဲ့သည်တိုးတက်သောခေတ်မှကျော်ကြားသောသူရဲကောင်းဖြစ်သည်
ကောင်းကင်တမန် - ပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်ကောင်းကင်တမန်ဆိုလိုခြင်း
Aspen - အမေရိကရှိနာမည်ကြီးအမြင့်ဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း
Barrow - အလက်စကာမှာအေးတဲ့နေရာ
Bianco - အီတလီမှာဖြူ
Blanco - စပိန်ဘာသာဖြင့်အဖြူဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်
လေပြေ (တိုတိုအတွက် Bree)
Burr - shivers
အဲလ်ဆာ - ဒစ္စနေးနှင်းဖုံးဘုရင်မ
Glace (သို့မဟုတ် Glacey) - ပြင်သစ်ဘာသာတွင်ရေခဲကိုဆိုလိုသည်
Glacier (Glacia သည်တိုတောင်းခြင်း၊
Hielo - စပိန်ဘာသာတွင်ရေခဲကိုဆိုလိုသည်
Kaya - ဂရိဘာသာဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်း
Khione - ဆောင်းရာသီ၏ဂရိနတ်ဘုရားမ
Lixue - တရုတ်နိုင်ငံတွင်နှင်းကျခြင်းကိုဆိုလိုသည်
Luka - ရုရှားဘာသာဖြင့်အလင်းကိုဆိုလိုခြင်း
Nanook - အစ်စကင်မ်ရှိပိုလာဝက်ဝံဆိုသည်
Neige - ပြင်သစ်လိုနှင်းရည်ကိုဆိုလိုတာ
မဟုတ် - ဆောင်းရာသီတွင်အလွန်အေးသောနော်ဝေနိုင်ငံပြီးနောက်
Olaf - ဒစ္စနေး၏အကြိုက်ဆုံးနှင်းလျှောစီး
Sonja - ရေခဲပြင်ဘုရင်မ
Topaz - အလွန်တောက်ပ။ ကြည်လင်သောကျောက်မျက်
Zircon (Zircon for short) - အဖိုးတန်။ အရောင်မဲ့သောကျောက်မျက်ရတနာ
မတော်တဆမှု - လက်တင်စကားဖြင့်သူမ - ဝံပုလွေကိုဆိုလိုခြင်း
အမရပူရ (Ava or Rog အတွက်တိုသည်) - Inuit
Bele - ယုန်
ကြံ - ဆဲလ်တစ်အတွက်ဝံပုလွေပေါက်ကလေးဆိုလိုတာ
Dib - အာရဗီ
ဝံပုလွေ - ဟနျဂရေီ
Gonzalo - စပိန်ဘာသာစကား
Loup - ပြင်သစ်
လူး - ပြင်သစ်လိုဝံပုလွေငယ်လေးကိုဆိုလိုခြင်း
Lupe - စပိနျ
Lupo - အီတလီ
Lupu - မောလ်တီဈအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Lupus - လက်တင်
Lyk - ဂရိ
ခွဲခြားသတ်မှတ် - Dogrip
Olcan - ဆဲလ်တစ်
အိုနိုင်း - တမီးလ်
Orú - ဂျီဂျီ
Sinapu (တိုတောင်းသောအတွက် Sina) - Ute
Susi - ဖင်နစ်ရှ်
တလ - Sioux
တာаша - Caddo
Ujku - အယျလျဘေးနီးယနျး
Wolf - ဒိန်းမတ်
Wolf - လစ်သူအာနီယံ
Volk - ရုရှ
Vuk - ခရိုအရှေနျ
Wolf - အင်္ဂလိပ်! ဒါ့အပြင်ကြိုးစားပါ ဝီလီယံ
သူမသည် - ဝံပုလွေ - အာဖရိကန်
Wulf - ဂျာမန်
Ze'ev - ဟီဘရူး
ဝံပုလွေများသည်ခမ်းနားထည်ဝါပြီးခွန်အားကြီးမားပြီး၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အလွန်အစွမ်းထက်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ခြင်း ။ ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ခွေးတွေကို ၀ ံပုလွေလို့နာမည်ပေးလေ့ရှိတယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးတစ်ကောင်၏မိတ်ဆွေများစွာသည်တောရိုင်းမျိုးရိုးဗီဇ (မီးခိုးရောင်မှ ၀ င်ငွေမှဆင်းသက်လာခြင်း) ကိုသူတို့၏သွေးထဲတွင် ၀ ံပုလွေကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇမျိုးစိတ်များနှင့်အတူထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်သည်။ ဂျာမန်သိုးထိန်းနှင့် Husky ။ ဝံပုလွေနာမည်ကိုရွေးခြင်းသည်ထိုသူငယ်များအတွက်သာမျှတသည်။
ဒီခွန်အားကောင်းတဲ့မျိုးနွယ်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိလား။ သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဝံပုလွေအမည်ကိုလိုချင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့နာမည်ကောင်းစာရင်းစုဆောင်းခြင်းကိုသင်နှစ်သက်ခဲ့ပြီးသင်ရှာဖွေနေသည့်အရာများနှင့်အခြားအရာများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Golden Retrievers vs. Labradors: ဘယ်ခွေးကအကောင်းဆုံးလဲ။
chihuahua ကို terrier နှင့်ရောသည်